Ispoortii - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 9:17 1 Muddee 20219:17 1 Muddee 2021
Deeggaraan teessuma gaazexeessituu gabaasarra turtee rukute dorgommiiwwan ispoortiirraa dhorkame
Deggaraan kubbaa miilaa Xaaliyaan geezexeessituu tamsaasa kallattiirra turte 'teesumashee keessa' rukkutuu isaatiif Poolisiin Xaaliyaan qophiiwwan ispoortiirratti waggoota sadiif akka hin hirmaanne dhorke.
...tti maxxanfame 7:34 30 Sadaasa 20217:34 30 Sadaasa 2021
Liyooneel Mesiin badhaasa Taphataa cimaa Addunyaa marroo 7ffaa injifate
Taphataan sarara fuulduraa Paariis Seent Jermen fi Arjentiinaa Liyooneel Mesiin Badhaasa Balandoor marsaa 7ffaadhaaf injifachuudhaan rikoordii qabate.
...tti maxxanfame 6:46 28 Sadaasa 20216:46 28 Sadaasa 2021
Piriimer Liigii Inglizii keessatti gareen Liiverpuul tapha Saawuzhampitan waliin taasiseen 4-0n mo'achuun Chelsiitiin qabxii tokko qofaan caalamee lammaffaarra taa'ee jira. Tapha kaleessa dirree Liiverpuul Anfiilditti taphatame kanaan Diyaajoo Jotaa Liiverpuuliif goolii lama lakkoofsiseera.
...tti maxxanfame 10:05 22 Sadaasa 202110:05 22 Sadaasa 2021
Zidaan 'leenjisaa Yunaayitid tahuuf fedhii hinqabu' jedhame
Maanchistar Yunaayitid kilabicha akka leenjisuuf Zinaddiin Zidaanif gaaffii dhiyeessuus, ammatti gara Old Trafford deemuun leenjisuuf fedhii akka hin qabne maddeen isatti dhiyaatan himan.
...tti maxxanfame 11:23 21 Sadaasa 202111:23 21 Sadaasa 2021
Yunaayitid Ole Gonaar Solshaayer leenjisummaarraa kaase
Maanchistar Yunaayitid erga gaafa Sambataa 4fi1'n Waatfordiin injifatamee as leenjisaa kilabichaa Ole Gunaar Solshaayer leenjisummaarraa kaase.
...tti maxxanfame 5:28 14 Sadaasa 20215:28 14 Sadaasa 2021
Deeggaraa kubbaa miilaa qaroo- dhabeessa
Ga’eessa ijoolluummaa kaasee yeroo dheeraaf kilaba tokkoof amanamedha Takilee Abarraan. Waggoota muraasa dura qaroo dhabuus ammallee dirree kubbaa miilaa irraa hin hafne. Jaalalli hammanaa eessaa madde? Maaltu Takileefi Buna - kilabicha walitti fide?
...tti maxxanfame 15:51 9 Sadaasa 202115:51 9 Sadaasa 2021
Gareen Itoophiyaa taphattoota 10’n morkatan waancaa irra aanan
Gareen kubbaa miilaa dubartoota Itoophiyaa ganna 20 gadii waldorgommii kubbaa miilaa Bahaafi Giddugala Afrikaa kan taphattoonni biyya keessaa irratti hirmaatan, CECAFA, irra aanuun waancaa fudhate.
...tti maxxanfame 4:20 8 Sadaasa 20214:20 8 Sadaasa 2021
Namoonni maaliif Maraatoonii fiigu?
Olompiikii yeroo jalqabaatiif Ateensitti bara 1896 adeemsifame irratti atileetota 17 qofatu hirmaate ture. Ofii namoon maaliif Maaraatoonii fiigu?
...tti maxxanfame 9:57 7 Sadaasa 20219:57 7 Sadaasa 2021
Atileet Daawit Siyyum fiigiicha kiiloomeetira shaniin riikkardii cabsite
Atileetiin Itoophiyaa Daawiit Siyyuum dorgommii fiigicha dubartootaa kan fageenya kiiloomeetira shanii (mixed race) jedhamuun beekamuufi Faransaayiitti gaggeeffameen riikardii cabsuun ishee gabaafame.
...tti maxxanfame 13:39 2 Sadaasa 202113:39 2 Sadaasa 2021
Antooniyoo Koontee Tootenahaamiif, Unay Imiree fi Shaampiyoonsi Liigii har'aa
Tootenahaam leenjisaa duraanii Chelsii Antooniyoo Koontee qacaruuf waliigaleera
Page 1 Keessaa 24